One Stop Service - Study Abroad
မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသားမိဘများနှင့် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ၏ယုံကြည်အားထားရာ STUDY ABROAD Information Centre သည် Australia, Canada, Holland, New Zealand, Singapore, Switzerland, United Kingdom နှင့် United States of America နိုင်ငံတို့ရှိ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ပညာ ဆက်လက်သင်ကြား လိုသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ ကို ကူညီ၊ အကြံပေး၊ လမ်းညွှန်ပေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရေး စင်တာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် တစ်ဦးချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်း ၊ ကျောင်းလျှောက်ခြင်း နှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဗီဇာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များထားရှိထားခြင်း သာမက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံအောင်ရရှိမည့် One-stop Application Centre တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
ထိုပြင် “သင့်ပညာရေးအတွက် ယုံကြည်အားထားရာ STUDY ABROAD Information Centre” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် အတိုင်း STUDY ABROAD Information Centre သည် (၂၀၀၉)ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို မှန်ကန်သော ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများနှင့် ရာနှုန်းပြည့် စကောလားရှစ်များကို အခမဲ့ ကူညီလျှောက်ထားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
STUDY ABROAD Information Centre မှနွေးထွေးသောဝန်ဆောင်မူ One Stop Service
👉 ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို မိမိရွေးချယ်လိုသည့် ဘာသာရပ်များကို အသေးစိတ် အကြံပေးဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နှင့် မိဘများ ပြည်ပရှိ တက္ကသိုလ်ကို သွားရောက်လေ့လာရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ကို အဖွဲ့လိုက် Summer Program တက်ရောက်ရန် နှင့် Study Tour သွားရောက်လေ့လာရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းလျှောက်ထားရာနှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်၊ စာတန်းများကို သေချာ စီစစ်ပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ မိမိ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးသိရှိနိုင်ရန် အခမဲ့ English Placement Test များ စစ်ပေးခြင်း။
👉 တက်ရောက်လိုသည့် ကျောင်း နှင့် ကျောင်းဆောင်များ လျှောက်ထားရန် ကူညီပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းသားများ နှင့် မိဘများကို ဗီဇာများ ကူညီလျှောက်ထားပေးခြင်း။
👉 လိုအပ်သော ဆေးစစ်ချက်များ (Medical Check-up) အချိန်မှီ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။
👉 သွားရောက်မည့် နိုင်ငံရှိလေဆိပ်တွင် တွေ့ဆုံ ကြိုဆိုရေးနှင့် အဆောင်ကိစ္စအဝဝကို အခမဲ့ကြိုတင် စီစဉ်ပေးခြင်း။
👉 ပြည်ပ မထွက်ခွာမီ Personal Skills ၊ Communication Skills များ မြှင့်တက်လာစေရန် Work-shop များ စီစဉ်ပေးခြင်း။
👉 ပြည်ပ မထွက်ခွာမီ ပြင်ဆင်မှုများ၊ လမ်းခရီးအစီအစဉ်များ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ အစရှိသော သိရှိသင့်သည့် အချက်အလက်များအားအသေးစိတ် ရှင်းပြပေးခြင်း။
👉 ပညာဆည်းပူးစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဆက်လက် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အခက်အခဲ များရှိပါက လိုအပ်သလိုကူညီအကြံပေးခြင်း။
👉 ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နှစ်ပတ်လည် စုစည်းတွေ့ဆုံပွဲများ စီစဉ်ပေးခြင်း။
(ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ ထောက်ချက်)
Step 1 – Meet Our Consellor to discuss your option.
Step2– We lodge your application and we provide you with an offer withinaweek.
Step3– We guide you step-by-step through visa Application process.
Step4– We assit you with hostel and airport pick-up booking.
Step5– We arrange departure briefing for you to have soft landing in overseas.